Wiricheya Yakakura Kuchengeta Kune Avo Vasingade Iyo
Vacheche boomers uye chizvarwa chehondo vanozivikanwa nehungwaru, kuzvimirira, kushanda nesimba uye kugona kwavo kuramba vari munzira. Ivo vave kuburikidza nehondo uye kuora mwoyo asi vakaenda zvakare kuvaka dzimba nenharaunda, vakagadzira mabhizinesi uye vagadzire matsva maindasitiri.
Ivo vakabatsira vamwe munguva yavo yekusarudzika uye vave vatungamiriri venharaunda. Rubatsiro rwakapihwa, havana kukumbira rubatsiro. Izvi zvinotsanangura hushingi hwavo asi hazvishandure pamaitiro ekuti kuchembera kumba kuve kubudirira kune wese munhu.
Ko kana Vasingade Rubatsiro?
Kuita kuti vagamuchire rubatsiro kwakanyanya kunetsa pane kuwana zviwanikwa zvekutarisirwa kwavo. Izvo zvakanaka chaizvo nzira inodzosera kumashure yekurera vechidiki kana uchipa rubatsiro kuvabereki vachembera. Vechidiki zvishoma nezvishoma vanowana mamwe mabasa sezvavanokura. Nevabereki vari kuchembera, iwe unononoka kupa kuti uite akasiyana madiki mabasa. Ivo vari kukuyedza iwe kuti uone kana iwe uchigona kuita iro basa sekuda kwavo uye kuve nechokwadi kuti hausi kutora pamusoro pehupenyu hwavo.
Nzvimbo dzakanaka dzekutanga dzinosanganisira kuodha mishonga, kubatsira pakubika; kuita imba nekugadzirisa mota asi chete kana zviri izvo newe uchiita mabasa aya. Kuvapa zviyeuchidzo zvine ushamwari zvezviitiko kana zviitiko kana padyo nekarenda kana kushanda pamapurojekiti pamwe chete zvinopa unhu nguva pamwe chete. Kana vachida rubatsiro kumba, tanga nemaawa mashoma pamwedzi. Kana ivo vakarwara kana kuti vari kupora iyo ingava nguva yakanaka yekupa rubatsiro rwako.
Kuchengetwa kwemumba masevhisi kunoderedza kunetseka kwemhuri uye kudiwa panguva yavo. Vakwegura vane hanya zvakanyanya nezvekuve mutoro kumhuri yavo pane kuva nehanya nezvavanoda ivo pachavo.
Kuita kuti munhu achembere abvume kuchengetwa kunogona kuve kunonetsa uye haugone kumanikidza shanduko pavari. Dzimwe nguva vanogona kuzviona vari mumamiriro ezvinhu anogona kuchinja mafungiro avo. Tinogona kungoita moyo murefu uye kuvarega vaone kudiwa kwekuwedzera kwekutarisirwa kwavo.